Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa Group dia mividy fiaramanidina maharitra lavitra miisa 10
Enga anie 3, 2021
Lufthansa Group dia manosika mialoha amin'ny fanavaozana ny fiaramanidina, manangona vola be amin'ny fiaramanidina vaovao
Lufthansa Group dia nanambara ny fividianana fiaramanidina Airbus A350-900 dimy sy fiaramanidina Boeing 787-9 dimy
Ny fiaramanidina dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampivoarana ny faharetana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fandaniana solika sy ny gazy karbonika amin'ny 30 isan-jato
Andian-tsambo Lufthansa Group: karazana modely fiaramanidina kely kokoa, fahombiazana betsaka
Vondrona Lufthansa dia manafaingana ny fanavaozana ny andian-tsambony. Ny fiaramanidina vaovao, lafo vidy sy lafo vidy solika dia manolo ny karazany taloha amin'ny zotra fohy, salantsalany ary lavitra. Vokatr'izany dia nanapa-kevitra ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG fa hividy fiaramanidina halavirana folo: Airbus A350-900 dimy ary Boeing B787-9 dimy. Nanaiky ny fividianana androany ny Birao mpanara-maso. Ireo fiaramanidina ireo dia hiasan'ny Lufthansa Airline ary hanamafy ny tolotra premium 5-kintana an'ny marika fototra an'ny vondrona.
Tafiditra ao amin'ny programa fanavaozana ny fiaramanidina efa hatry ny ela, fiaramanidina vaovao 175 no halefa amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Lufthansa Group amin'ity folo taona ity.
Carsten Spohr, Filohan'ny Birao Mpanatanteraka sy CEO an'ny Deutsche Lufthansa AG, hoy izy:
“Na dia amin'izao fotoan-tsarotra izao aza dia manohy manangona vola amin'ny fiaramanidina Lufthansa Group maoderina maoderina kokoa sy mahomby kokoa isika. Mandritra izany fotoana izany, mandroso isika amin'ny fanavaozana ny fiaramanidina lava be lavitra noho ny nomanina mialoha ny areti-mifindra coronavirus noho ny fotoana mety hanohitra. Ny fiaramanidina vaovao no maoderina indrindra amin'ny karazany. Tianay ny hanitatra bebe kokoa ny andraikitray amin'ny fitarihana manerantany, ankoatry ny zavatra hafa, miaraka amina vokatra manaparitaka faratampony sy fiaramanidina manara-penitra - indrindra satria tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana isika. "
Ny voalohany Boeing 787-9 dia kasaina hisidina ho any Lufthansa raha vao amin'ny ririnina manaraka, miaraka amin'ny hafa hanaraka ny tapany voalohany amin'ny 2022. Ny fanapaha-kevitra androany dia nitondra ny totalin'ny baiko hentitra ho an'ny Boeing 787-9s sy Boeing 777-9s ho 45 fiaramanidina.
Noho ny fiatraikany mahatsiravina ateraky ny areti-mifindra coronavirus amin'ny sidina manerantany dia tsy afaka natolotra tao anatin'ny roa volana lasa izay ny fiaramanidina nasaina nataon'ny sidina sasany. Lufthansa dia nanao dinika niaraka tamin'i Boeing ary nahita fomba hividianana dimy 787-9 izay efa vita. Mandritra izany fotoana izany dia nahatratra fifanarahana tamin'i Boeing ny Vondrona momba ny drafi-panaterana namboarina.
Vaovao momba ny dia any Barbados
Barbados dia namoaka fanambarana momba ny mpandeha an'arivony olo-malaza izay manaporofo fa tsara ny COVID-19
Fanadihadiana: olon-dehibe 3 amin'ny 4 amerikana mikasa ny hanao dia indray mandeha farafahakeliny ao anatin'ny enim-bolana ho avy
Ny sidina tsy an-kiato any Kansas City mankany Cancun ao amin'ny Southwest Airlines
Mankalaza ny herintaona hanokafana indray i Caribbean Caribbean
Ny teti-bolan'ny fizahan-tany any Odisha India dia nahita fiakarana tsy mbola nisy toa azy